मिलन बगाले आइतबार, साउन ३, २०७८, ०९:०७
तपाईं आरामै हुनुहोला। तर, तपाईंको पार्टीलाई आराम छैन। पार्टी विभाजन गरिदिन दुवै समूह (तपाईं र उपेन्द्र यादव समूह) ले निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरिसकेको छ। तपाईंहरुको माग बमोजिम गरिदिन निर्वाचन आयोग तारतम्य मिलाउँदैछ।
तपाईंहरु पार्टी मिलाउने मामिलामा परिपक्व नदेखिए पनि विभाजन गर्ने मामिलामा परिपक्व देखिनुभयो। खोसाखोस गर्नुभएन। एक अर्कालाई धेरै गालीगलौज पनि गर्नुभएन। दुवै पक्षले अलिअलि स्पष्टीकरण र कारबाही गरेजस्तो गर्नुभयो। बेलैमा थाक्नुभयो। ‘संगै बस्न सकिएन, कागज हेरेर मिलाएर छुट्याइदिनू’ भन्नुभयो। ठीक गर्नुभयो। तर, यस्तो अवस्था कसले र किन ल्यायो, त्योचाहिँ पक्कै मनमनै समीक्षा गर्नुभएकै होला।
जस्तो नाम उस्तै व्यक्तित्व। तपाईं शालीन र शिष्ट सुनिनुहुन्छ। मसिनो स्वरले थोरै बोल्नुहुन्छ। गाली गर्दा पनि गाली खाएको महसुस नहुने गरि बोल्नुहुन्छ। सुविधाभोगी भएको, आर्थिक घोटाला गरेको, पदको दुरुप्रयोग गरेको, दादागिरी गरेको, धाकधम्की देखाएको खबर कहिल्यै कतै आएन।
२०४८ सालदेखि लामो समय सत्ताको नजिक रहनुभयो। सत्तामा रहँदा होस् या बाहिर, तपाईंको शालीन छवि सधैं कायम छ। तर। त्यो शालीनताभित्र केही रहस्य लुकेका छन्। तपाईंलाई पढ्नै गाह्रो छ। पत्याउनै गाह्रो छ।
अचेल धेरै नेता सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिनुहुन्छ। कति जना आफ्नै बलबुताले सक्रिय हुनुहुन्छ भने, कतिपय परिवारका सदस्य वा निजी सचिवको सहयोगमा। उहाँहरु हरेक भेटघाट र गतिविधिलाई छिनछिनै पोष्ट गर्नुहुन्छ। समसामयिक राजनीतिबारे आफ्ना विचार राख्नुहुन्छ। पार्टीको माइन्यूटदेखि अरु जानकारी तात्तातै दिनुहुन्छ। केही नेता त सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्को देखिनुहुन्छ। लड्ने, भिड्ने, मन नपर्नेलाई ब्लक गर्ने गर्नुहुन्छ।
लौ न त आफै प्रधानमन्त्री बन्नुस् भन्दा आफैंले प्रतिगामी भनेको मान्छेलाई अघि सारेर दिलोज्यानले सघाउनुहुन्छ। राति १२ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रतिगमनलाई सघाउने मिटिङमा छलफल गर्न जानुहुन्छ, अनि चिया खान मात्र गएको हो भन्नुहुन्छ। यस्तो छलछाम किन गर्नुहुन्छ महन्थजी?
फेसबुकमा तपाईंको नामको एउटा खाता खुलेको रहेछ, जसमा ६००० जनाले लाइक गरेका रहेछन्। फेसबुक खाता पनि तपाईंजस्तै शान्त र लगभग निस्क्रिय देखियो। राजनीतिक भेटघाटका, तर विना क्याप्सनका तस्वीर छन्। पार्टीका निर्णयहरु स्क्यान गरेर राखिएको छ, तीनमा पनि क्याप्सन छैन। करिब दुई महिना (मे, २०, २०२१) पुरानो एउटा पोष्टमा लेखिएको छ, ‘जसपा नेपालको माग बमोजिम आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जन्मसिद्ध प्राप्त नागरिकको सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारलाई धन्यवादको साथै करीब ५.५ लाख युवा अनागरिकबाट नागरिक बन्ने अवसर प्राप्त गरेकोमा हार्दिक बधाई!!’
तपाईंको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा किन यसरी कमजोर भयो? नागरिकताको विषय सल्टाउनका लागि पास नहुने सुनिश्चितता भएको अध्यादेशको सहारा किन लिनुभो? प्रधानमन्त्री पदमा मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मौका किन फालिदिनुभयो? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफको प्रतिक्षा छ। मेसो मिलेमा कोही पत्रकारले अन्तरवार्ताका क्रममा तपाईंलाई यी प्रश्न सोधिदिए पनि हुन्छ।